Ma waxaad tahay warshad?
Haa, Waxaannu nahay soo-saare xirfad-yaqaan ah ilaa 1996 xagga bixinta cuntooyin tayo sare leh, waxaan bixin karnaa qiimaha ugu habboon.
Ma I Caawin Kartaa Inaan Sameeyo Badeecaddayda Nooc leh?
Hubso, astaanta OEM waa la aqbali karaa.
Waa Maxay Faa'iidooyinka Suugadaada Soy?
Ugu horreyntii, marka la barbar dhigo maraqa soyka ah ee suuqa ku jira, kuweenna ma lihin wax ilaaliyayaal ah. Marka labaad, waxaan haynaa noocyo badan oo soos soy ah oo leh dhadhan gaar ah loona isticmaali karo cunno karsan oo kala duwan. Saddexaad, maraqayaga soyka ah ayaa lagu sameyn karaa iyadoo loo raacayo tilmaamaha macaamiisha.
Maxay Ku Kala Duwan Yihiin Hon Mirin Iyo Mirin Fuu?
Mirin fuu waxay ku yar tahay aalkolo aad u yar waana miro dhadhan leh hon mirin. Wadamada qaarkood oo aan khamriga lagu cabin, waxaad u isticmaali kartaa inaad ku beddesho hon mirin.
Ma booqan karaa Wershaddaada?
Si diirran ugu soo dhowow, waxaan ku tusi doonnaa khadkayaga wax soo saarka iyo xarunteenna.
Immisa Shahaadooyin ayay Shirkaddaadu Leedahay?
Shirkaddayadu waxay heshay shahaadooyinka KOSHER, HALAL, ISO9001 iyo HACCP.
Sidee loo Samee Maraqa Soy-kaaga?
Maraqayagayaga soy waxaa lagu sameeyaa soybean waxaana loodajiyaa hab dhaqameedka, dabiiciga ah. Ma jiro midab wax ku dariaysa, iyo wax ku darsi aan ilaalin lahayn.
Maxay Ku Kala Duwan Yihiin Chitsuru & Chitsuruya?
Chitsuru waa shirkadeena magaca-Nantong Chitsuru Foods Co., Ltd. Chitsuruya waa sumadeena shirkadeena, waxaan kaloo leenahay Senetsu, Waraku & Edozen.
Maxaa Bixiya Badda Kalluunkeeda Udiyaarka Uumiga?
Dabeecad. Badda "Seaweed" waxay leedahay dhadhan cusbo leh oo dhadhan leh oo macaan ka dhigaya dhadhan gaar ah - aadna u wanaagsan.
Maxay Kalluun badan oo Badda ka mid ah u Dhadhamiyaan Kalluun Iyo Kuwayagu Ma Dhadhamiyaan
Waxa ugu muhiimsani waa tayada biiyaha badda ka dibna dheelitirka xawaashka.
Halkee Ka Iibi Kartaa Biyo-Kalluunka Tayada leh oo Tayotiisu Tayo Tahay?
Pls dooro sumadda Chitsuruya. Kalluunka badda waxaan ku iibinaynaa si waafaqsan qaddarinta. Waxaan raacnay ISO9001; Heerarka HACCP si ay u ilaaliso cunnooyinka badbaadada & Nadaafadda. Mawsada wanaagsan ee la dubay waxay leedahay astaamahan: cagaar madow, dhadhan, adkeysi, alga ku jirin xaashida, dalool ama go 'go'ay. Doonayaa in badan oo ogaada, fadlan la xiriir: [emailka waa la ilaaliyay]
Sidee loo Doortaa Biyo la qalajiyey (Waxyaabaha ay ka kooban tahay Kaluunka la dubay) oo tayo sare leh?
Maqaar-biyood la qalajiyey oo heer sare ah: Sida caadiga ah, si fiican loo qalajiyey badda waa midab madow iyo midab bunni ah oo aad u dhalaalaya. Waxay dhadhamisaa udgoon, jilicsan, macaan yar oo ur gaar ah ma leh. waxay leedahay dhumuc si fiican loo qaybiyey iyo gees nadiif ah. Bar malahan! Ma jiro algae cagaaran! Darajada hoose ee la qalajiyey badda: waa midab jaalle ah oo aan lahayn dhalaal, waxay dhadhamisaa duug mana udgoon tahay, muuqaal ahaan, jajabka badwiijku wuu dhaawacmaa oo ma siman yahay, sidoo kale, wuxuu ku dhex jiraa diatoms iyo algae cagaaran oo leh bar.
Maxay Ku Kala Duwan Yihiin Badda Kuuriya Iyo Chitsuruya Seaweed?
Badweynta Kuuriyada Kuuriya ayaa aad ugu adag inay samaysato Sushi iyo dhadhanka aan macaanayn.
Waa maxay Faa'iidooyinka Suugada Maraqaaga ah ee Dhalada Yar?
Si dhakhso leh ayaad u isticmaali kartaa si aysan u sahlaneyn soo saarista bakteeriyada. Taas oo qalloocisa dhadhanka asalka ah ee maraqa soyka.
E-mail: [emailka waa la ilaaliyay]com